ကားရေဆေးတဲ့ ဘဝကနေ ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားဖြစ်လာတဲ့ ဆန်းချက် (Sanchez)
ကားရေဆေးသမားဘဝမှ ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားဖြစ်လာသူ (သို့) ဆန်းချက် (Sanchez)
1 Aug 2017 . 3:59 PM
ကမ္ဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ မအောင်မြင်ခင်တုန်းက ဘယ်လိုတွေ ဘဝနာခဲ့ရလဲ၊ ဘယ်လိုတွေ ရုန်းကန်ခဲ့ရလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းလှပါတယ်။ ရွှေထီးဆောင်းတဲ့ လူတွေတချို့ ဘယ်လိုတွေနင်းပြားဖြစ်ခဲ့ကြလဲ။ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဆင်းရဲသားဘုံကနေ ကမ္ဘာကျော်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ အလက်ဆစ်ဆန်းချက် (Alexis Sanches) အကြောင်းကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
ဆန်းချက်ကို ချီလီနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ တိုကိုပီလာမြို့ (Tocopilla) ၁၉၈၈ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၉ရက်မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ တိုကိုပီလာမြို့ဆိုတာက သတ္ထုတူးဖော်တဲ့နေရာဖြစ်ပြီး ဆင်းရဲသားတွေ ပြည့်နေပါတယ်။ ဖခင်စွန့်ခွာသွားတဲ့အတွက် ဆန်းချက်တို့မောင်နှမတွေဟာ ဒုက္ခမျိုးစုံ ရောက်ခဲ့ရပါတယ်။ ပညာမတတ်တဲ့ မိခင်ဟာ ဆန်းချက်တက်နေတဲ့ ကျောင်းမှာပဲ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဆန်းချက်ဟာ သူဘောလုံးသမားမဖြစ်ခဲ့ရင် သတ္ထုတွင်းမှာပဲ အလုပ်ကြမ်းသမားဖြစ်နေပါပြီလို့ ရင်ဖွင့်ဖူးပါတယ်။
သူ့ရဲ့မိခင်ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်နေတာကို မကြည့်ရက်တဲ့ ဆန်းချက်ဟာ ကျောင်းအားတဲ့အချိန်တွေမှာ ကားရေဆေးတာတွေ၊ ကျွမ်းဘားခုန်တာတွေ ပြုလုပ်ပြီး မိသားစုကို ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်။ မြို့တော်ဝန်ဟာ ဆင်းရဲတဲ့မိသားစုဝင်တွေကို အားကစားဖိနပ်ဝေငှတဲ့အခါ ဘောလုံးပညာပါရမီရှိတဲ့ ဆန်းချက်အတွက် မြေတောင်မြှောက်လိုက်သလုိုပါပဲ။ ကျောင်းပေါင်းစုံပြိုင်ပွဲမှာ နာမည်ထွက်လာတော့ C.D. Cobreloa လူငယ်အသင်းက ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ဆန်းချက်ဟာ အသင်းဝင်ကြေးကိုတောင် မပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
C.D. Cobreloa မှာ ဆန်းချက်
၁ဂိုး-ဂိုးမရှိ ရှုံးနိမ့်နေတဲ့အချိန်မှာ ဆန်းချက်ဝင်လာပြီး ၈ဂိုးတိတိသွင်းကာ အနိုင်ရရှိတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို သဘောကျလို့ နည်းပြ နယ်ဆင်အက်ကိုစတာ (Nelson Acosta) ဟာ ၂ဝဝ၅ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှာ C.D. Cobreloa အသင်းကြီးမှာ ပါဝင်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အသင်းမှာ ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ ဆန်းချက်ကို အီတလီစီးရီးအေကလပ် အူးဒီနီးစ် (Udinese) က ၂ဝဝ၆ခုနှစ် ဧပြီ ၂၁ရက်နေ့မှာ ပေါင်၁.၇သန်းနဲ့ ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။ အူးဒီနီးစ်အသင်းဟာ ဆန်းချက်ကို ကိုလိုကိုလို (Colo-Colo) နဲ့ ရေးဗားပလိတ် (River Plate) အသင်းတွေဆီမှာ အငှားချလိုက်ပါတယ်။ အငှားချရာကနေ အူးဒီနီးစ်အသင်းကို ၂ဝဝ၈ခုနှစ် ဇူလိုင်လမှာ ပြန်ရောက်လာပြီး အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြခဲ့ပါတယ်။ ၉၅ပွဲပါဝင်ကစားခဲ့ကာ ဂိုး ၂ဝသွင်းယူခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့အဆင့်မီတိုက်စစ်မှူးဖြစ်ကြောင်း ပြသခဲ့ပါတယ်။
ဆန်းချက်ရဲ့ဘဝကို အပြောင်းအလဲဖြစ်စေခဲ့တာက ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးကလပ်လို့ တင်စားခဲ့ကြတဲ့ ဘာစီလိုနာ (Barcelona) အသင်းက ၂ဝ၁၁ခုနှစ် ဇူလိုင် ၂ဝမှာ ယူရို ၂၆သန်းနဲ့ ခေါ်ယူခဲ့တာပါ။ လီယွန်နယ်မက်ဆီ၊ ဇာဘီ ၊ အင်နီယေစတာတို့လို ကမ္ဘာကျော်တွေနဲ့ တွဲဖက်ကစားပြီး အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းကို ပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာစီလိုနာအသင်းမှာ ၈၈ပွဲကစားခဲ့ပြီး ၃၉ဂိုး သွင်းယူခဲ့ကာ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား (၂ဝ၁၁) ၊ လာလီဂါဖလား (၂ဝ၁၂) နဲ့ ကိုပါဒယ်ရေးဖလား (၂ဝ၁၁) တွေကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။
၂ဝ၁၄ခုနှစ် ဇူလိုင် ၁ဝရက်နေ့မှာ အာဆင်နယ်အသင်းကို ပေါင် ၃၁.၇သန်းနဲ့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ နည်းပြကြီး အာဆင်ဝင်းဂါးရဲ့ အားထားရတဲ့ တိုက်စစ်မှူးကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီး ၁ဝ၃ပွဲမှာ ၅၃ဂိုးအထိ သွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ တစ်ပတ်လုပ်ခ ပေါင်၁သိန်း၎သောင်း (ဒေါ်လာ ၁သိန်း၈သောင်း) နဲ့ ဒေါ်လာ ၁၄၆သန်းအထိ ကြွယ်ဝနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဆန်းချက်ဟာ ဇာတိမြေကိုတော့ မမေ့တဲ့ အားကစားသမားပါ။ တိုကိုပီလာမြို့မှာရှိတဲ့ လူငယ်ဘောလုံးကျောင်းတွေကို အားကစားဝတ်စုံတွေနဲ့ ဒေါ်လာ၁သိန်း၆သောင်း ပေးလှူခဲ့ပါတယ်။ ဆန်းချက်ဟာ ကလေးဘဝကို ဆင်းဆင်းရဲရဲဖြတ်သန်းခဲ့ရပေမယ့် သူ့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကြောင့် အခုချိန်မှာတော့ ဘာစီလိုနာမြို့မှာ အိမ်တစ်လုံး၊ လန်ဒန်မြို့မှာ အိမ်တစ်လုံးနဲ့ သန်းကြွယ်သူဌေးတစ်ယောက် ဖြစ်နေပါပြီ။
ကမ်ဘာကြျောပုဂ်ဂိုလျတှဟော မအောငျမွငျခငျတုနျးက ဘယျလိုတှေ ဘဝနာခဲ့ရလဲ၊ ဘယျလိုတှေ ရုနျးကနျခဲ့ရလဲဆိုတာ စိတျဝငျစားဖို့ ကောငျးလှပါတယျ။ ရှထေီးဆောငျးတဲ့ လူတှတေခြို့ ဘယျလိုတှနေငျးပွားဖွဈခဲ့ကွလဲ။ ဒီတဈပတျမှာတော့ ဆငျးရဲသားဘုံကနေ ကမ်ဘာကြျောဖွဈလာခဲ့တဲ့ အလကျဆဈဆနျးခကျြ (Alexis Sanches) အကွောငျးကို ပွောပွခငျြပါတယျ။
ဆနျးခကျြကို ခြီလီနိုငျငံမွောကျပိုငျးမှာရှိတဲ့ တိုကိုပီလာမွို့ (Tocopilla) ၁၉၈၈ခုနှဈ ဒီဇငျဘာ ၁၉ရကျမှာ မှေးဖှားခဲ့ပါတယျ။ တိုကိုပီလာမွို့ဆိုတာက သတ်ထုတူးဖျောတဲ့နရောဖွဈပွီး ဆငျးရဲသားတှေ ပွညျ့နပေါတယျ။ ဖခငျစှနျ့ခှာသှားတဲ့အတှကျ ဆနျးခကျြတို့မောငျနှမတှဟော ဒုက်ခမြိုးစုံ ရောကျခဲ့ရပါတယျ။ ပညာမတတျတဲ့ မိခငျဟာ ဆနျးခကျြတကျနတေဲ့ ကြောငျးမှာပဲ သနျ့ရှငျးရေးလုပျခဲ့ရပါတယျ။ ဆနျးခကျြဟာ သူဘောလုံးသမားမဖွဈခဲ့ရငျ သတ်ထုတှငျးမှာပဲ အလုပျကွမျးသမားဖွဈနပေါပွီလို့ ရငျဖှငျ့ဖူးပါတယျ။
သူ့ရဲ့မိခငျပငျပငျပနျးပနျးလုပျနတောကို မကွညျ့ရကျတဲ့ ဆနျးခကျြဟာ ကြောငျးအားတဲ့အခြိနျတှမှော ကားရဆေေးတာတှေ၊ ကြှမျးဘားခုနျတာတှေ ပွုလုပျပွီး မိသားစုကို ထောကျပံ့ပေးခဲ့ပါတယျ။ မွို့တျောဝနျဟာ ဆငျးရဲတဲ့မိသားစုဝငျတှကေို အားကစားဖိနပျဝငှေတဲ့အခါ ဘောလုံးပညာပါရမီရှိတဲ့ ဆနျးခကျြအတှကျ မွတေောငျမွှောကျလိုကျသလိုပါပဲ။ ကြောငျးပေါငျးစုံပွိုငျပှဲမှာ နာမညျထှကျလာတော့ C.D. Cobreloa လူငယျအသငျးက ဖိတျချေါခဲ့တယျ။ အဲဒီအခြိနျတုနျးက ဆနျးခကျြဟာ အသငျးဝငျကွေးကိုတောငျ မပေးနိုငျခဲ့ပါဘူး။
C.D. Cobreloa မှာ ဆနျးခကျြ
၁ဂိုး-ဂိုးမရှိ ရှုံးနိမျ့နတေဲ့အခြိနျမှာ ဆနျးခကျြဝငျလာပွီး ၈ဂိုးတိတိသှငျးကာ အနိုငျရရှိတဲ့ စှမျးဆောငျရညျကို သဘောကလြို့ နညျးပွ နယျဆငျအကျကိုစတာ (Nelson Acosta) ဟာ ၂ဝဝ၅ခုနှဈ ဖဖေျောဝါရီလမှာ C.D. Cobreloa အသငျးကွီးမှာ ပါဝငျခှငျ့ပေးလိုကျပါတယျ။ အသငျးမှာ ခွစှေမျးပွနတေဲ့ ဆနျးခကျြကို အီတလီစီးရီးအကေလပျ အူးဒီနီးဈ (Udinese) က ၂ဝဝ၆ခုနှဈ ဧပွီ ၂၁ရကျနမှေ့ာ ပေါငျ၁.၇သနျးနဲ့ ဝယျယူခဲ့ပါတယျ။ အူးဒီနီးဈအသငျးဟာ ဆနျးခကျြကို ကိုလိုကိုလို (Colo-Colo) နဲ့ ရေးဗားပလိတျ (River Plate) အသငျးတှဆေီမှာ အငှားခလြိုကျပါတယျ။ အငှားခရြာကနေ အူးဒီနီးဈအသငျးကို ၂ဝဝ၈ခုနှဈ ဇူလိုငျလမှာ ပွနျရောကျလာပွီး အကောငျးဆုံးခွစှေမျးပွခဲ့ပါတယျ။ ၉၅ပှဲပါဝငျကစားခဲ့ကာ ဂိုး ၂ဝသှငျးယူခဲ့ပွီး ကမ်ဘာ့အဆငျ့မီတိုကျစဈမှူးဖွဈကွောငျး ပွသခဲ့ပါတယျ။
ဆနျးခကျြရဲ့ဘဝကို အပွောငျးအလဲဖွဈစခေဲ့တာက ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံးကလပျလို့ တငျစားခဲ့ကွတဲ့ ဘာစီလိုနာ (Barcelona) အသငျးက ၂ဝ၁၁ခုနှဈ ဇူလိုငျ ၂ဝမှာ ယူရို ၂၆သနျးနဲ့ ချေါယူခဲ့တာပါ။ လီယှနျနယျမကျဆီ၊ ဇာဘီ ၊ အငျနီယစေတာတို့လို ကမ်ဘာကြျောတှနေဲ့ တှဲဖကျကစားပွီး အကောငျးဆုံးခွစှေမျးကို ပွသနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဘာစီလိုနာအသငျးမှာ ၈၈ပှဲကစားခဲ့ပွီး ၃၉ဂိုး သှငျးယူခဲ့ကာ ခနျြပီယံလိဂျဖလား (၂ဝ၁၁) ၊ လာလီဂါဖလား (၂ဝ၁၂) နဲ့ ကိုပါဒယျရေးဖလား (၂ဝ၁၁) တှကေို ရရှိခဲ့ပါတယျ။
၂ဝ၁၄ခုနှဈ ဇူလိုငျ ၁ဝရကျနမှေ့ာ အာဆငျနယျအသငျးကို ပေါငျ ၃၁.၇သနျးနဲ့ ရောကျရှိလာခဲ့ပါတယျ။ နညျးပွကွီး အာဆငျဝငျးဂါးရဲ့ အားထားရတဲ့ တိုကျစဈမှူးကွီးဖွဈခဲ့ပွီး ၁ဝ၃ပှဲမှာ ၅၃ဂိုးအထိ သှငျးယူခဲ့ပါတယျ။ တဈပတျလုပျခ ပေါငျ၁သိနျး၎သောငျး (ဒျေါလာ ၁သိနျး၈သောငျး) နဲ့ ဒျေါလာ ၁၄၆သနျးအထိ ကွှယျဝနပွေီဖွဈပါတယျ။ ဆနျးခကျြဟာ ဇာတိမွကေိုတော့ မမတေဲ့ အားကစားသမားပါ။ တိုကိုပီလာမွို့မှာရှိတဲ့ လူငယျဘောလုံးကြောငျးတှကေို အားကစားဝတျစုံတှနေဲ့ ဒျေါလာ၁သိနျး၆သောငျး ပေးလှူခဲ့ပါတယျ။ ဆနျးခကျြဟာ ကလေးဘဝကို ဆငျးဆငျးရဲရဲဖွတျသနျးခဲ့ရပမေယျ့ သူ့ရဲ့ကွိုးစားအားထုတျမှုတှကွေောငျ့ အခုခြိနျမှာတော့ ဘာစီလိုနာမွို့မှာ အိမျတဈလုံး၊ လနျဒနျမွို့မှာ အိမျတဈလုံးနဲ့ သနျးကွှယျသူဌေးတဈယောကျ ဖွဈနပေါပွီ။